Wikipedhiya chinyogwa chemudandira chinounganidzwa ungwaru, ruzivo nohunyanzvi hwezvikamu zvese zveraramo remarudzi osezvayo erino pasi. Zvakanaka zvakadzama kwazvo kuti gapu rese iri reungwaru, ruzivo nohunyanzvi rive rinonyogwa mururimi gwaamai. Basa iri ngatiritange nhasi tigorisiirawo vana vedu navana vawoo, zvichingoenda, zienda nokuenda.
Mutauro wedu isu vanhu hauna kugara uchinzi ChiShona kwete. Muchena akanga achinzi Clement Doke ndiye akatanga kushandisa izwi rekuti ChiShona mugore ra1931. Mutauro wedu unonzi ChiVanhu.
Parizvino, muno muWikipedhiya mune zvinyogwa zvinoita 3,239 zvakanyogwa mururimi gweChiShona. Munokokwa mese, ani naani zvake, kuti muwedzere zvinyogwa izvi. Vanyori, vadzidzisi nevadzidzi veChiShona muzvikoro zvikuru zvedzidzo munokokwa kuti mutitungamirire pabasa iri. Tinodaidza kunyanya zvikuru sei avo vadzidzi nevadzidzisi vari muboka rezvidzidzo zveChiShona paYunivhesiti yeZimbabwe uyewo avo vese vakapedza zvidzidzo zveChiShona pachikoro chikuru ichi.
Tsvakai muwedzere ruzivo gwenyu nezve Kuisa zvinyogwa zvemumwe mutauro wegumwe rudzi muWikipedhiya
Zvinowanikwa Mudemhe Rino
Afrikaans · Akan · አማርኛ · Bamanankan · Chi-Chewa · chiTumbuka · Ɛʋɛ · Fulfude · Gĩkũyũ · هَوُسَ · Igbo · isiXhosa · isiZulu · Kanuri · Kinyarwanda · Kirundi · Kiswahili · Kongo · Lingala · Luganda · Malagasy · Oromoo · Sängö · seSotho · Setswana · SiSwati · Soomaaliga · ትግርኛ · Tshivenda · Twi · Wolof · Xitsonga · Yorùbá · (For other large Wikipedias, look into the side-bar.)
Retrieved from "https://sn.wikipedia.org/w/index.php?title=Peji_Rekutanga&oldid=48563"
This page was last edited on 7 Zvita 2016, at 20:13.